भारतीय क्रिकेट बोर्डले क्रिकेटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा क्रिकेटर पृथ्वी डिप्रेसनमा, उपचार गर्न इंग्ल्याण्ड जाने « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भारतीय क्रिकेट बोर्डले क्रिकेटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा क्रिकेटर पृथ्वी डिप्रेसनमा, उपचार गर्न इंग्ल्याण्ड जाने
एजेन्सी । भारतका चर्चित युवा क्रिकेटर पृथ्वी श डिप्रेसनमा शिकार भएका छन् । भारतिय मिडियाले जनाए अनुसार उनी भारतीय क्रिकेट बोर्डले क्रिकेटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि डिप्रेसनमा परेका हुन् ।
१९ वर्षे क्रिकेटर पृथ्वीले डिप्रेसनमा गएका उनी त्यसबाट मुक्त हुन इंग्ल्याण्ड जाने भएका छन् । प्रतिबन्धित औषधिको नियम (एन्टी डोपिङ) उल्लंघन गरेको भन्दै बीसीसीआईले युवा ब्याट्सम्यान शलाई ८ महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यद्यपि उनलेआफुमाथि लागेको आरोपको स्विकार गरेका थिए । तर, उनले आफुले नजानेर सो पदार्थ सेवन गरेको बताएका थिए ।शले भारतबाट अन्तिम पटक वेष्ट इण्डिजविरुद्व टेष्ट खेल हैदराबादमा खेलेका थिए । युवा माझ उनी रुचाइएका खेलाडी हुन ।
साग विजेता खेलाडीलाई बालुवाटार बोलाएर के रमिता गरेको ? देशलाई स्वर्ण पदक दिलाउनेको किन दुखाइयो दिल ? कसरी बन्यो खेलाडीका आँसु बालुवाटारमा बग्ने वातावरण ?
काठमाडौं, मंसिर २६-१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा विजेता खेलाडीलाई सरकारले पुरस्कार घोषणा गरेको
पिपिएलको खेल तालिका सार्वजनिक
कास्की – दोस्रो संस्करणको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग(पीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ
एउटाभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेलाई जनही ११ लाख पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ -सरकारले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)मा पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कारको घोषणा गरेको छ ।
जलपरी गौरिका सिंहले ६५ लाख पाउने
काठमाडौं ।जलपरी अर्थात पौडीका कीर्तिमानी खेलाडी गौरिका सिंहले ६५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएकी छिन्